Dagaalyahannada mucaaradka Iiraan ee aan guurka loo oggolayn 6 Saacadood ka hor La wadaag qodobkan Facebook La wadaag qodobkan Messenger La wadaag qodobkan Twitter La wadaag qodobkan Email La wadaag | Somalilandhorta
Browse: Home / Dagaalyahannada mucaaradka Iiraan ee aan guurka loo oggolayn 6 Saacadood ka hor La wadaag qodobkan Facebook La wadaag qodobkan Messenger La wadaag qodobkan Twitter La wadaag qodobkan Email La wadaag
Dagaalyahannada mucaaradka Iiraan ee aan guurka loo oggolayn 6 Saacadood ka hor La wadaag qodobkan Facebook La wadaag qodobkan Messenger La wadaag qodobkan Twitter La wadaag qodobkan Email La wadaag
Posted by Yasmin Ahmed on November 12, 2019 in Warar | 15 Views | Leave a response
Muddo lix sano ah, Albania ayaa hooy u ahayd mid ka mid ah mucaaradka ugu weyn dalka Iiraan, oo lagu magacaabo Mujahideen-e-Khalq, oo magaciisa loo soo gaabiyo MEK. Balse boqolaal ka tirsan ciidanka ururkani ayaa hadda isaga baxay-waxa ayna qaar kood sabab uga dhigeen shuruucda qallafsan ee ururkaasi.
Shuruucdaasi waxaa ka mid ah in ciidamada aan loo oggolayn in ay guursadaan iyo in ay xiriir la sameeyaan qoysaskoooda. Haddase tiro badan oo ka tirsanaan jiray ciidanka ururkaasi ayaa ku xayiran magaalada Tirana ee caasimadda Albania, waxaana u suurtagali la’ in ay Iiraan ku laabtaan ama xitaa ay nolashooda dib u yagleelaan.
“Lama hadlin xaaskeyga iyo wiilkeyga muddo ka badan 37 sano – waxay iyagu la tahay in aan dhintay. Balse waxaan u sheegay in aan noolahay isla markaana aan ku noolahay dalka Albania…waa ay ooyeen,” ayuu yiri Gholam Mirzai oo ka mid ah ragga isaga baxay ciidamada ururkani mucaaradka ah.
Gholam Mirzai ayaa sheegay in uu aad u murugooday markii ugu horreysay ee uu taleefoon kula xiriiray qoyskiisa ka dib sanaddo badan oo aysan wada hadlin. Hadda waa 60 jir, waxa uuna xerada milatari ee ururka MEK ee ku taal duleedka Tirana ka baxsaday laba sano ka hor.
Hadda waa shaqo la’aan wuxuuna ka qoomameynayaa wixii uu horey u soo maray, isagoo sidoo kale ku eedeynayaa saaxibaddiisii ay ‘mujaahidiinta’ ka wada tirsanaayeen in ay hadda qaarkood u basaasayaan dowladda Iiraan oo horey cadowgooga u ahayd.
Ururkaasi MEK ayaa taariikh ahaan dhibaato weyn soo maray. MEK oo ah urur islaami ah balse xambaarsan afkaarta shuuciyadda ayaa wuxuu gacan ka geystay kacdoonkii sanadkii 1979-kii lagu riday dowladdii Shah ee dalka Iiraan. Balse xiriirka kala dhaxeeya Aayatullah Khumeynii ayaa markiiba sii xumaaday. Markii dowladda dalkaasi ay gacan bir ah ku qabtay taageerayasha ururkaasi ayay xubnaha MEK waxay la baxsadeen nolashooda.
Dowladda deriska ah ee Ciraaq ayaa magangelso siisay, waxaana xilligii colaaddii Iiraan iyo Ciraaq ee sanadkii 1980 ilaa 1988 ay ciidamada ururkaasi ka barbar dagaalamayeen ciidamadii dowladdii Sadaam Xuseen.
Gholam Mirzai wuxuu ka tirsanaa milatariga dalka Iiraan ka hor inta aysan gacanta ku dhigin ciidamada dalka Ciraaq billowgii colaadda labada dal. Muddo siddeed sano ah ayuu ahaa maxbuus dagaal oo u xiran dowladda Ciraaq. Balse xilligaasi maxaabiista dagaal ee Iiraan laga qabtay ayaa waxaa lagu dhiirigelinayay in ay ku biiraan xubnaha MEK. Sidaa ayuuna markii dambe ugu biiray ururkaasi.
Mirzai wuxuu haatan ka mid yahay boqolaalka nin ee ka tirsanaan jiray ciidamada ururkaasi MEK, balse markii dambe isaga baxay. Qaar ka mid ciidamda ururkaasi ayaa waddamo kale oo Yurub ah lagu geeyay lacago ay soo direen qoysaskooga. Inta la ogyahay ilaa haatan laba ka mid ah ciidamadii hore ee ururkaasi ayaa hadda ku noqday dalkooga Iiraan. Balse tiro badan oo ka mid ah xubnihii hore ee ururkaasi ayaa wali waxa ay ku xayiran yihiin gudaha dalka Albania oo ay shaqo la’aan ku haysato.
Haddaba su’aashu waxay tahay siday xubnaha ururkani oo horey waddamda Yurub iyo Mareykanka ay u aqoonsadeen urur argagixiso haatan ku tageen qeybo ka mid ah Yurub
Sanadkii 2003-dii, duullaankii Mareykanka uu hoggaaminayay ee lagu riday dowladdii Ciraaq ayaa ururkani MEK halis hor leh galiyay. Madaxweyne Saadaam Xuseen oo ahaa ninkii ilaalinayay danaha ururkani mucaaradka ku ah dowladda Iiraan ayaa meesha ka baxay, waxaana markiiba billowday beegsi ka dhan ah ciidamadii u dagaallami jiray ururkaasi oo qaarkood la laayay, boqolaal kalena xabsiyada la dhigay.
Dowladda Mareykanka oo aad uga cabsi qabta xaaladda bani’aadanimo ee soo wajihi karaysa xunbaha ururkani ayaa dowladda Albania ka codsaday in ay qaabisho oo ay meel dejiso 3,000 oo ka tirsan ciidamada ururkaasi MEK.
“Waxaan siinay gabbaad ay uga badbaadaan weerarrada iyo tacaddiyada ka dhanka ah iyaga, waxaan sidoo kale doonaynay in ay nolal caadi ah ku noolaadaan gudaha dalkan oo aysan la kulmi doonin dhibaato iyo weerar midna,” ayuu yiri Lulzim Basha, oo xilligaasi ka mid ahaa dowladda Albania haddase mucaarad ah.
Inkastoo reer Albania ay caan ku yihiin in ay isku qabsadaan wax kasta, haddana mucaarad iyo muxaafidba, waa ay ogol yihiin in xubnaha ururkani reer Iiraan ay dalkooga ku sii noolaadaan.
Ciidamada ururkani ayaa Albania xilligaasi u arkayay meel wanaagsan oo lagu noolaan karo. Gholam Mirzai wuxuu xitaa la yaabay carruurta yar yar ee dalkan ee dhammaantood taleefonnada gacanta wada sita. Ciidamada ururkani ayaa markii hore la dejiyay guryo ku yaal meel u dhow magaalada caasimadda u ah Albania balse shuruurcda qallafsan ee ururkaasi ayaa sababtay in tiro badan oo ciidamada ururkaasi ka tirsan ay isaga baxaan ururka.
Markii ay joogeen gudaha dalka Ciraaq, mas’uuliyiinta ururkani waxa ay aad u xaddideen nolasha gaarka ah ee ciidamadooda. Taasi ayaa sababtay in mararka qaar ay ciidamadu si qarsoodi ah ula xiriiraan qoysaskooga.
“Dhabarka dambe ee guryaha aan degganayn waxaa ku yaallay barxad ama dhul bannaan oo taliyeyaasha ciidamadu ay nagu amri jireen in aan maalin kastaa jimicsi ku sameyno,” ayuu yiri Xasan Heyrani oo hadda ka baxay ururkaasi.
Lahaanshaha sawirkaHASSAN HEYRANY
Heyrani iyo saaxibbadiisa kale waxay si qarsooni ah u aadi jireen goob intarneed leh oo ku taal meel u dhow barxaddaasi si ay ula xiriiraan qoysaskooga.
“Markii aan Ciraaq joognay, haddii aannu dooneyno in aan qoysaskayaga la xiriirno waxay madaxdayada nagu oran jireen waxaad tihiin dad daciif ah oo aad u jilicsan, sidaa awgeed wax xiriir ah lama aanan lahayn qoysaskayaga,” ayuu yiri Heyrani. “Balse markii aan nimid Tirana, waxaan helnay adeegga intarneedka oo caadi ah.”
Dhammaadkii sanadkii 2017-kii, ayuu ururakni ka guuray goobtii xarunta u ahayd ee hore, wuxuuna degay meel kale oo qiyaastii 30km u jirta caasimadda dalkaasi Albania.
Goobtani cusub looma oggola weriyeyaasha aan fasaxa ka heysanin maamulka ciidamada. Balse bishii Luuliyo ee sanadkan, kumannaan qof ayaa ka soo qeybgalay xaflad loogu magac daray xafladda MEK ee xoreynta Iiraan. Siyaasiin ka kala socota daafaha caalamka, shakhsiyaadka saameynta leh ee dalka Albania iyo dadka deggan tuulada deriska la ah xaruntan cusub ee ururkani ayaa waxa ay kumannaan ka tirsan ciidamada MEK iyo hoggaamiyahooda Maryam Rajavi, kala qeybgaleen xafladdaasi. Dadkii xafladdaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa qareenka gaarka ah ee madaxweyne Donald, Rudy Giuliani.
“Dadkani waa shakhsiyaad ay ka go’antahay helitaanka xorriyad,” ayuu yiri Giuliani oo farta ku fiiqaya ciidamada tirada badan ee ururkani ee halkaa fadhiyay oo dhammaantood tuuto xirnaa.
Siyaasiinta saameynta leh ee sida Giuliani oo kale ah ayaa aad u taageero ujeeddada MEK ee ah in xukunka laga rido dowladda Iiraan. Mabaa’diida ururkani waxaa ku xusan in uu aad u tixgelinayo xuquuqul insaanka, sinnaanta ragga iyo dumarka iyo dimuquraadiyadda Iiraan.
Balse Xasan Heyrani marna kuma qanacsana arrintaasi. Sanadkii la soo dhaafay ayuu isaga baxay ururkani, waxaana sida uu sheegay u cuntami waayay waxa uu ku tilmaamay cabburinta nolasha gaarka ah ee shakhsiga xubinta ka ah ururkani. Heyrani ayaa ururkani ku biiray isaga oo da’ yar oo dhawr iyo labaatan jir ah.
“Waxaa na soo jiitay mabaa’diida ururkani. Balse mar haddii aad oggoshahay dimuquraadiyad, marnaba ma ahan in aad faraha la gashaa oo aad cabburisid nolasha shakhsiga,” ayuu yiri Heyrani.
Heyrani wuxuu aad u xusuustaa, shir galab kasta ay geli jireen muddadii uu ka midka ahaa ciidanka ururkaasi.
“Mid kastaa oo innaga mid ah waxa uu haystay buug yar oo lagu qorayo waxyaabaha la xiriira damacayaga ragannimo. Tusaale ahaan waxaad leedahay maanta damac guur ama galmo ayaa igalay.’”
Xiriir jaceyl iyo guur ayaa mamnuuc ka ah xubnaha ururkani MEK. Waayadii hore sidaa ma aysan ahayn oo waalidiinta iyo carruurtooduba waa loo oggolaa in ay ku biiraan ciidamada ururkani. Balse markii si xun gudaha Iraan loogu jebiyay ururkani ayaa hoggaamiyeyaashiisu waxay is tuseen in dagaallameyaashu ay ku mashquuleen arrimahooga gaarka ah. Waxa xigay ayaa ahaa in raggu ay furaan xaasaskooga iyo in ay iska musaafuriyaan carruurtooda, halka ragga oo xaas iyo carruur la’aan ah ay xubin ka sii ahaadaan ururkani.
Sida uu sheegayo Heyrani, buuggaasi yar waxaa lagu qori jiray dareenka shakhsi kasta.
“Tusaale ahaan, ‘Marka aan telefishinka ka daawado cannug yar, waxaan markiiba ka fikirayaa carruur iyo xaas.’”
Waxyaabahaasi buugga ku qoran ayay tahay in askari kastaa uu ka hor akhriyo taliyeyaasha iyo saaxibbadiisa.
“Waa arrin aad ugu adag qof kastaa,” ayuu yiri Heyrani oo xerada ay ku jiraan xubaha ururkaasi haatan u arko xero ay ku nool yihiin xoolo.
BBC-da uma aysan suurtagelin in arrimahani ay wax ka weydiiso mas’uuliyiinta ururkaasi sababtoo ah waxay diideen in ay wareysiyo siiyaan BBC-da.
Laba diblomaasi oo reer Iiraan ah ayaa dalka Albania laga eryay ka dib markii lagu eedeeyay in ay maleegayeen qorsheyaal ka dhan ah ciidamada MEK. Midowga Yurub ayaa xukuumadda Tehraan ku eedeeday in ay qorsheynayso in ay khaarajiso dadka ka soo horjeeda iyada ee ku nool waddamada Netherlands, Denmark iyo Faransiiska.
Xubno ka tirsan xisbiga haya talada dalka Albania ayaa BBC-da u sheegay in aad looga walaacsan yahay laamaha mukhaabaraadka waddankaasi oo aan awoodin in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa in ka badan 2,500 oo ka tirsan ururkan MEK oo leh tababar milatari.
Qof diblomaasi ah ayaa sheegay in kuwa isaga baxay ururkaasi ay qaarkood u shaqeeyaan dowladda Iiraan oo ay u basaasaan.
Gholam Mirzai iyo Xasan Heyrai ayaa labaduba lagu eedeeyay in ay basaas u yihiin xukuumadda Tehraan. Balse eedeymahaasi ayay labaduba beeniyeen.